Ogaden News Agency (ONA) – Saxaafadda Itobiya iyo Sacuudiga oo weerar isku haya maxay ku dambayn?
Saxaafadda Itobiya iyo Sacuudiga oo weerar isku haya maxay ku dambayn?
Posted by ONA Admin	/ March 19, 2013
Sacuudiga wuxuu ka mid ahaa dalalka sida weyn u maalgahaday dalka Itobiya, kumana imaanin arintaa daraasad xaqqa dhaqaalaha iyo suuqa ee waxay ahayd arin ay ka ololeeyeen labada nin ee amxaarada ay dhaleen ee nufuudka ku dhex leh xukuumadda Sacuudiga iyo arimaha maalka.
Waxaan la soconaa diblomaasigii ugu caansanaa Washigton inuu ahaa Bandar Bin Suldaan oo Sacuudiga u ahaa safiirka u fadhiya halkaa, saaxiib gaar ahna la ahaa qoyska reer Bush. Prince Bandar oo hooyadii ay tahay Xabashi wuxuu hadda masuul ka yahay arimaha Sirdoonka iyo Amniga guud ee dalka, taaso ah jaga aad u sareysa. Sidoo kale Sh. Al-Camuudi oo isagana ay hooyadii tahay Xabashi ayaa dhaqaalaha dalka Itobiya gacanta ku hayaa isla markaana ah ragga shuraakada la’aha Tigreega. Labadaa nin ayaa aad ugu ololeeyay inuu Sacuudiga maalgashado dalka Itobiya taasoo lagu qiyaasay inay gaadhaysao 13-14 Milyaar oo Doolar.
Maalmahan waxaa aad u kacsan saxaafadda labada dal oo isku shidaya, iyadoo saxaafadda Sacuudiga ay ku eedeyanayaan dhalinayara Itobiyaan ah oo dhac iyo boob ba’an ku haya dadka shacabka ah ee dagan meelaha ka durugsan amaanka. Waxaa kaloon la soconaa in dhowr jeer ay soo qabqabteen hay’adda qaabilsan arimaha diinta iyo asluubta dad Itobiyaan ah oo guryo u kiraystay inay ku sameeyaan khamri iyo faaxishooyin kale oon laga ogoleyn dalka Sacuudiga.
Saxaafadda Itobiya ayaa arintaa kaga jawaabtay in shaqaalaha Itobiyaanka ah ee jooga Sacuudiga lagu hayo cadaadis iyo midab-takoor iyo xabsi iyo masaafuris sharci darro ah. Guryahan khamriga loo koreystayna waxay ku tilmaamaan marwalba inay yihiin meelo ay isugu yimaadeen gabdhaha Itobiyaanka oy ku cibaadaysanayeen. Waxayna saxaafadda Itobiya ku cadaadinayaan dawladda inay talaabo ka qaado arintaa oy beeraha la siiyay dadka Sacuudiga ah lagala wareego. Akhri
Hadaan u fiirasno arimahaasoo idil waxaa muuqanaya inay jiraan xurguf hoose oo la qarinayo inay banaanka u soo baxdo, hasa ahaatee dhanwalba uu doonayo inuu cadaadis xagga saxaafadda ah saaro dhanka kale suu u tanaasulo.
Waxaana laga yaabaa inay ku dambayn doonto Sacuudiga oo dalkaas Itobiya laga soo saaro isla marahaantaana Milyaaraadka ay galiyeen halkaa loo qaato magdhow. Gaar ahaan haddii ay sii socdaan banaanbaxyada ay wadaan dadka Muslimiinta ah oo inta badan ay dawladda Itobiya ku eedeyso xag-jireen raacsan madhabka Salafiga oo Sacuudiga loo aaneeyo inuu ku faafinayo caalamka intiisa kale.
Aynu isha ku hayno wixii ka soo kordha.